ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှပျက်ကွက်မှုများသည်တစ်ခါတစ်ရံ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးသည် Gadget သတင်း
Facebook စာမျက်နှာမှပျက်ကွက်မှုများသည်တစ်ခါတစ်ရံ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးပါသည်
ဒီနေ့ခေတ်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏အကောင့်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရာတွင်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေကြရသည်။
လူများစွာသည်၎င်းတို့အားချစ်ရသူများနှင့်အထီးကျန်ဖြစ်စေသည့်ပျက်ကွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါ်တယ်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုတိုင်ကြားခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်အခြားသူများကမူအမှားသည်အစည်းအဝေးအစတွင်မဟုတ်ဘဲဓာတ်ပုံအချို့တင်ရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောဝင်ရောက်ခွင့်ပြတ်တောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အချက်များကိုသိလို။ တစ် ဦး ထက်ပိုသောဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » Facebook စာမျက်နှာမှပျက်ကွက်မှုများသည်တစ်ခါတစ်ရံ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးပါသည်
129 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အလွန်မှန်ကန်သည်၊ portal တွင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အားနည်းချက်များရှိပြီးနှေးကွေးမှုနှင့်အမှားအယွင်းများကြောင့်သင်စိတ်ပျက်အားလျော့စေသည်။ ကြိုဆိုပါတယ်😛
မည်မျှစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ အမှားမက်ဆေ့ခ်ျတွင်လမ်းကြောင်းနှင့်အရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းကိုလည်းအမှားတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းတို့မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုမသိပါ ????
၃ ရက်တာငါ Facebook စာအုပ်ကိုဖွင့်လို့မရဘူး။ ငါကြိုးစားပြီး IT အကောင့်ကငါ့အကောင့်ပျောက်သွားပြီဆိုတာဘာကြောင့်ငါလုပ်နိုင်သလဲ။
MARIANA GOMEZ သို့ပြန်သွားပါ
အကယ်၍ အလွန်မှန်ကန်ပါကကျွန်ုပ်တွင်ဆိုက်ဘာ ရှိ၍ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်အားခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်တောင်းခံသည့်အဆင့်သို့ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ ဆက်သွယ်မှုအမှားမရှိလျှင်ထွက်မလာနိုင်ပါကကျွန်ုပ်မည်မျှကြာသည်ကိုမသိပါ။ ပြerrorနာသည်ပြwillနာဖြစ်သော်လည်းအလေးအနက်ထားပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်ပြုပြင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမှားအကြောင်းဖောက်သည်တွေဘာကိုပြောရမှန်းမသိတဲ့အတွက်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတာကြောင့်သူတို့ကကွန်ပျူတာတွေလို့ထင်ကြလို့ပါ။ အဲဒီစာမျက်နှာကလွဲလို့စာမျက်နှာအားလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Annie Herrera ဟုသူကပြောသည်
ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အမှားစာမျက်နှာသည်ဆက်လက်တက်လာနေပြီးမည်သည့်ဓါတ်ပုံကိုမဆိုတင်ခွင့်မပြုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြsoonနာကိုမကြာခင်ဖြေရှင်းပါ
Annie Herrera အားပြန်ကြားပါ
ဤအရာအားလုံးကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်စေသည်။ အမှားနိမိတ်သည်အမြဲတမ်းပေါ်ထွက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်စကားပြောခြင်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဂိမ်းများကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ ၎င်းသည်မစ်ရှင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏လိုင်းပျက်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ။ အမြန်ဆုံးအဖြစ်။
တရုတ်ပြည်ကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဖွင့်ဖို့ bridge အစီအစဉ်သစ်အကြောင်းတစ်ယောက်ယောက်ကသိတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသုံးတဲ့အရာတွေကိုပိတ်ထားပြီးပြီ
ဒီနေ့ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ထဲကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အဲဒီစာမျက်နှာကဗလာမကင်းသလိုပုံပေါ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ??
Facebook ကကျွန်ုပ်ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ခွင့်မပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်၏နံရံတွင်သာမကကျွန်ုပ်အမြဲမှတ်ချက်ပေးသောအဆက်အသွယ်များ၏ဓါတ်ပုံများကိုပါခွင့်မပြုပါ။ ငါဘာလုပ်နိုင်လဲ !! ကအရမ်း exasperating ဖြစ်ပါတယ် !!!! အရေးပေါ်အကူအညီ !!!
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုတောင် စတင်၍ မရနိုင်ပါ။ ???? ငါကညလုံးပေါက်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ဒါကစာမျက်နှာအလွတ်ထက်ကျော်လွန်နေတယ်။ ငါ့ကိုစာဖတ်ခွင့်ပြုပါ၊
ငါတကယ်နားမလည်ဘူး .. ဒါပေမယ့်ငါဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဖတ်ဖူးတယ် .. ငါ facebook အကောင့်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ အီးမေးလ်ထဲမှာအမှားလုပ်မိပြီးအက္ခရာ ၂ လုံးထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်အခုသတိမထားမိသေးဘူး၊ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပိုမိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါနှင့် ၎င်းသည်အီးမေးလ်ကိုမည်သည့်အကောင့်မှမပေးကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပါသည်။ ၎င်းမတိုင်မီလူတစ် ဦး ကဤကွန်ယက်သို့မဝင်မှီအီးမေးလ်အကောင့်များကိုဘာကြောင့်အတည်ပြုမပေးသနည်း။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်မသိရပါဘူး။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမပြီးခင်မှာအီးမေးလ်အကောင့်ဟာမမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့စာမျက်နှာအချို့ရှိပါတယ်။ ဒီအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်အမှားကလုံးဝပဲ။
၀ န်ကြီး ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်းခံခြင်းကိုငြီးငွေ့သည်။ ကျွန်ုပ် Facebook သို့ဝင်ပါကကျွန်ုပ်သည် FARMVILLE GAME ကိုအချိန်မရွေး တင်၍ မရပါက၎င်းကိုလွှင့်ရန်ကြိုးစားလျှင်၎င်းသည်ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့်အရာ။
သင်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားနေသော application သည်မရနိုင်ပါ (သို့) ကန့်သတ်ထားသည်။
ပြီးတော့ငါမကစားနိုင်ဘူး။ အားလုံးရဲ့အဆိုးဆုံးကတော့ငါဟာ FARMVILLE ဒါမှမဟုတ် FACEBOOK ကနေဆင်းသက်လာဖို့တရားမဝင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမလုပ်ခဲ့ဘူး။ မင်း
ဟယ်လိုကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကိုတောင် ဝင်၍ မရပါ။
celia kristel gomez castillo ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်အီးမေးလ်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြစ်သောအချက်အလက်များကိုထည့်သောအခါ… k သည်ဖွင့်တော့မည်ဟုထင်ပါသည်။ မပါ ၀ င်ပါကဘူးများကိုကျွန်ုပ်ကွတ်ကီးများလိုသည်ဟုဆိုပါသည်။ ဒါကဘာလဲဆိုတာငါသိတယ်။ ¿? ………… .. ပြီးတော့အဲဒါကိုငါမဖွင့်နိုင်ဘူး…ငါလုပ်နိုင်လား။
celia kristel gomez castillo သို့ပြန်သွားပါ
သူကငါ့ကိုအစကတည်းကဘာမှမတွေ့မြင်စေဘူး။ အရာရာတိုင်းဟာကွက်လပ်မရှိ။ ငါ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တောင်မှငါမမြင်ရဘူး။ သတိပေးချက်တွေငါ့ဆီရောက်လာတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုအမှတ်အသားပြုမယ်ဆိုရင်ငါလက်မှတ်ထိုးလို့မရဘူး !! 🙁
စနစ်မအောင်မြင်ပါ၊ မည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်စနစ်မအောင်မြင်ပါသနည်းဟုကျွန်ုပ်ပြောပြပါမည်။ ဒါကြောင့်မင်းကို chori အသံ ...
ငါ Farmville ပျော်စရာတစ်ခုပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းအပူတပြင်းရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါခြံထဲဝင်မဝင်ခင်အထိတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ပြီးတော့အရမ်းနှေးသွားတယ်၊ ငါတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ "အင်တာနက်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိပါ" ကစားရန်ရရန်နည်းလမ်း။ ဒီဟာကဘာလဲ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မှာလား ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး
rogel balmore ဟုသူကပြောသည်
balmore rogel အားပြန်ကြားပါ
buno ami ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်တွင်မပေါ်ပါ
မင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ငါထင်တယ်ဌ။ Cyber ​​မှာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတို့မလုပ်နိုင်အောင်ငါတို့လုပ်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတီထွင်ခဲ့သူကစိတ်ရှုပ်နေလို့လား။ ပြီးတော့ဒါလုပ်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကအရမ်းနှေးနေတယ်။ တစ်နေ့လုံးကုန်ပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိချင်တယ်၊ ဓာတ်ပုံတွေတောင်မတပ်နိုင်ဘူး။ အမြန်ဆုံးအဖြေလိုချင်တယ်။
ငါ့ထံသို့လမ်းလျှောက်ပါ၊ Facebook သည်ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှမအောင်မြင်သော်လည်းငါ့သူငယ်ချင်းများတွင်ဗိုင်းရပ်စ်များရှိနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ကမေးသည်၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ?
မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဓာတ်ပုံကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအကြိမ်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်ယခင်ကရိုက်ခဲ့သည့်ပုံပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များအားလုံးလည်းမပြပါ။
pz ငါမကြာခဏငါ့မျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်ပြmeနာတစ်ခုငါ့ထံသို့ ... တစ်ပါတ်ကနေကဒီမှာမှဖြစ်ပေါ်
ထိုအခါငါပြီးသား ... ငါ့သူငယ်ချင်းတွေသူတို့ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်လျှင်မေးကြပါပြီ
အမှန်တရားကတော့ Facebook မှာကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ တစ်ခုထဲကတစ်ခုကတော့မင်းရဲ့ Inbox မှာ notifications တွေမက်ဆေ့ခ်ျတွေရှိရင်၊ အဲဒါကိုသတိမပြုမိဘူးဒါမှမဟုတ်သင့်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာမဟုတ်ပါဘူး။
yaaaa ငါ haartaaa တယ် !!!! ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်သည် ၂ ပတ်ခန့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂလိကစာများကိုကျွန်ုပ်မတွေ့နိုင်ပါ၊ ဓါတ်ပုံများကို တင်၍ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်း၏ဓာတ်ပုံကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များ၏ဓါတ်ပုံများကိုမတွေ့ရပါ။ ငါ၏အဆက်အသွယ်များ၏နံရံ, ငါ့သူငယ်ချင်းများကိုမှပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျကိုမပို့နိုင်ပါ, ငါအနီရောင်တစ် box ကိုရ, အမှားတစ်ခုရှိခဲ့ကြောင်း, ငါနောက်မှကြိုးစား, သူတို့ကဖြေရှင်းဖို့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်, ahaaa !!!, ဒါပေမယ့်ဘယ်အချိန်မှာ? ????? …ဘာလုပ်ရမှာလဲ၊ ဒီအမှားတွေကိုငါဘယ်မှာအစီရင်ခံသင့်သလဲ။
ငါလည်းပျက်ကွက်ပါတယ်။ ငါချက်တင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမတွေ့နိုင်တာတောင်မှမဖွင့်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လဲဆိုတာမသိဘူး
ဒါပေမယ့်အခုတော့ငါစိတ်ပျက်အားငယ်နေတယ် ... ငါ့ရဲ့ msg မပေါ်လာဘူး၊ update လည်းမလုပ်ဘူး။ တစ်ခုခုအတွက်မျှော်လင့်တယ်၊ မင်္ဂလာပါလို့တစ်ခုခုပြောတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှန်တရားကငါ့ကိုအပူတပြင်းဖြစ်စေတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ... ငါချိတ်ဆက်ထားတယ် compun etc, etc, etc စသည်တို့နှင့်ငါကဲ့သို့သောရက်သတ္တပတ်2တူသောဘာမျှမရှိသည်နှင့်ကစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်
ချက်တင်စကားပြောခန်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုမအောင်မြင်ပါ၊ အဆက်အသွယ်အားလုံးပေါ်လာသည်၊ ဆက်သွယ်မှုမရှိသောသူများ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ ကူညီပေးပါ။
ကျွန်ုပ်၏နံရံ (သို့) ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအပေါ်မှတ်ချက်များစွာကိုကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ဤပြproblemနာအတွက်အဖြေကိုရှာ။ မရပါ။ အခြားသူငယ်ချင်းများတွင်ပြproblemsနာမရှိပါ၊ သူတို့နံရံတွင်ပြproblemsနာမရှိဘဲပြီးပြည့်စုံသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည် သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ၊ မင်းမင်္ဂလာပါလို့မင်းမပြောတတ်ဘူး .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုဖျက်လိုက်လို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါ ဦး ။
Suzie ချိုမြိန် ဟုသူကပြောသည်
ငါအပူတပြင်းပါပဲ !! ဘာငရဲဖြစ်ပျက်နေသည် !!! ငါ fb ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အမှားတခုသာပေါ်လာတယ်…ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများနှင့်မှတ်ချက်များပျောက်ကွယ်သွားသည် !! ဘာဖြစ်နေတာလဲ !!ooooooooo !! ငါ့သူငယ်ချင်းတော်တော်များများမှာ bronkas မရှိဘူး !! ဘာတွေထူးလဲ !!!!! itoooo fix !!!
Suzie Sweet အားပြန်ပြောပါ
ငါ faCe စာမျက်နှာကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါစာမျက်နှာကိုငါမျက်နှာစာစာအုပ်တည်းဖြတ်တဲ့ထိပ်ပိုင်းအပိုင်း၊ ကျွန်တော့်နာမည်၊ လော့ဂ်အင်ကိုသာကွက်လပ်ထဲမှာတွေ့ရပေမဲ့ငါ့ကိုခွင့်မပြုပါဘူး ဘာမှလုပ်ဖို့
ငါသည်ငါ့အကောင့်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုဒဏ္withာရီနှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျကိုငါဝင်ထည့်သောအခါငါငါ့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပါ, အခြားဒဏ္endာရီသူတို့ငါ့ကိုငါ့ဆဲလ်ဖုန်းသို့ကုဒ်တစ်ခုပို့ခြင်းနှင့်ငါဝင် ... ကောင်းပြီ, ဘာမျှမရောက်ရှိလာကြောင်းပေါ်လာ ငါ့ကိုပေးကုဒ်ထပ်မံပေးပို့ရန်အနည်းငယ်သော tab ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလများတွင်ကုဒ်များစွာတောင်းခံနေသည့်နောက်ဒဏ္getာရီတစ်ခုထပ်မံရရှိသည်။ နောက်မှကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်။ Queeeee pasaaaaa ???? queeeeee haaaagoooooo ??? ဒါက ၄ ရက်လောက်ရှိခဲ့ပြီးဒီကနေမပြီးသေးဘူး
jasmine karina သို့ပြန်သွားရန်
အမှန်အကန်ဖြစ်သည်…လွန်ခဲ့သော2ရက်ကကျွန်ုပ်မှတ်ချက်မပေးနိုင်တော့ဘဲအလွန်နှေးကွေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောသူငယ်ချင်းများမပေါ်လာပါ။ ကျွန်ုပ်လည်း link တစ်ခုမျှဝေနိုင်သည်။ ယခုငါ Facebook ထဲသို့ ၀ င်ရန်ကြိုးစားသောအခါကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်မမှန်ကြောင်းပြောပါသည် !! ! yaaaaa အပူတပြင်း x သည်ဤပြdesနာကိုဖြေရှင်းပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!
flor cantero မှစာပြန်ရန်
lauris moereno ဟုသူကပြောသည်
အိုး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမဟုတ် (သို့) သင်လိုချင်လျှင်ဂူဂဲလ်တွင်ပုံရသည်၊ စာမျက်နှာ၏ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုသာပေါ်လာသည်၊ ထူးဆန်းနေပြီးကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ
lauris moereno သို့ပြန်သွားရန်
အကယ်၍ မှားသည်ဆိုလျှင်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုတစ်နေ့လုံးမမြင်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် chat options, notifications နှင့် message များသည် load မလုပ်နိုင်လျှင်ဖြေရှင်းပါ။
Fb, x ဆဲလ်ဖုန်း n အလုပ်မလုပ်သေးသောအမှန်တရား၊ အရာအားလုံးကျဆင်းမှု၊ သင်စကားစလိုက်သည်နှင့်လျင်မြန်စွာလဲကျသွားသည်၊ ထို့နောက်ဆဲလ်ဖုန်းကုမ္ပဏီများသည်အင်တာနက်အားသွင်းရန်သူတို့၏မျက်စိကိုပိတ်ထားကြသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသူတို့ပေးသင့်သည့်အတိုင်းပေးမည်ဆိုပါကပြproblemနာမရှိပါကအလွန်ဆိုးသည်မှာမမှန်ပါ။
charly salamanca ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Facebook ကိုလေးရက်မျှမသုံးနိုင်ပါ၊ အကောင့်ကိုခေတ္တပိတ်ထားကြောင်းညွှန်ပြသည့် box တစ်ခုရရှိပါသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အခြေအနေများနှင့်ဆန့်ကျင်။ တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပြုလုပ်ပါ။ Cockies တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုပြောင်းပါ၊ ကျွန်တော့်အကောင့်ကိုခွဲခြားပါမယ်။
charly salamanca မှစာပြန်ရန်
အမှန်တရားကကျွန်တော့်ကိုအလွန်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပုံရသည်၊ ဒီနည်းကအဖြေတစ်ခုပေးသည်။ ငါစကားပြောခန်းကိုအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး၊ ငါ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစကားတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ဒီဆက်စပ်မှုကိုအပြီးသတ်ဖို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏နံရံသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အဆက်အသွယ်များ၏ဓာတ်ပုံများတွင်မည်သည့်အရာကိုမျှမှတ်ချက်မပေးနိုင်ပါ။ (စိတ်မကောင်းပါ။ သင်၏မှတ်ချက်ကိုထည့်။ မရပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားပါ) ။ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားအရာများကို upload တင်ခြင်းက၎င်းသည်“ အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မိနစ်အနည်းငယ်တွင်ထပ်မံကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး ။ ဘာတွေထူးလဲ????
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်တူညီသောပြသနာရှိသလားဆိုတာသိချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုကျွန်ုပ် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ (ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာမှ) ကျွန်ုပ်အားဤသို့ပြောပြသည် - မှားယွင်းသောမှတ်တမ်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအမှား၊ ကျွန်ုပ်ထပ်မံကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှတစ်ပတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီနေ့ဇွန် ၂၄ ရက် (၂၀၁၂ သိသာထင်ရှား) ဖြစ်ပြီးပြtheနာကိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့သေးပါ။
ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာသုတေသနလုပ်နေတုန်း Facebook ဟာမှားနေပုံရတယ်။
ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ သင်၌ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာမျက်နှာကိုဖွင့ ်၍ မရပါ၊ ကွန်ပျူတာမှမဟုတ်ပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်ပို့လိုက်သည်။ အဆင်ပြေပါသည်။ Dacebook မှအပအရာအားလုံးကိုဖွင့်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ့မယ်။
Julian_sanjuan ၁၀ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲ ၀ င်တဲ့အခါမှာပြသနာတွေရှိတယ်။ ငါ username နဲ့ password ရေးလိုက်တယ်၊ စာမျက်နှာကို ၀ င်လိုက်တာကိုနှိပ်လိုက်ရင် update လုပ်ပြီးအစကိုပြန်သွားမှာပါ။ တဖန်ငါ username နှင့် password ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်နောက်တဖန်ဖြစ်ပျက် ... တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအတူတူပင်ပြproblemနာရှိခဲ့လျှင်၎င်းနှင့်ဖြေရှင်းနိုင်လျှင်, ငါ့ကိုပြောပြပါနှင့်မကူညီလျှင်ငါ Hotmail စာမျက်နှာကိုတောင်မဝင်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးမျက်နှာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် ၀ င်လိုသောအခါလျှို့ဝှက်နံပါတ်သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအီးမေးလ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်။
andrea martin အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးမျက်နှာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းလိုသောအခါလျှို့ဝှက်နံပါတ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်မမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးမျက်နှာစာအကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူလိုပါက
Brayan quintero ဟုသူကပြောသည်
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာပြaနာရှိနေပြီးမျက်နှာကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။ ထိုစကားဝှက်နှင့် Hotmail နေရာကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ သူ့ကိုအဲဒီမှာ ၀ င်ဖို့သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါသူကစာမျက်နှာကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်၊ အဲဒါကငါ့အလုပ်သင်ကအသံတိတ်နေသလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီစာမျက်နှာနဲ့ပဲမတွေ့ရဘူး၊ ကျန်တဲ့သူတွေကငါ့ကိုနည်းနည်းလေးအကူအညီပေးမလားကြည့်ရတာကောင်းတယ်။
Brayan Quintero အားစာပြန်ပါ
မိုက်ကယ်ကီဗင် Valero Mayorga ဟုသူကပြောသည်
Michael Kevin Valero Mayorga ကိုပြန်ပြောပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိသူငယ်ချင်းအချို့၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မဖွင့်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုရှာ။ ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းစာမျက်နှာသည်သက်တမ်းကုန်သွားပြီဟုဆိုသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်စိတ်မချရသောဆက်သွယ်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးနောက်ဆုံးကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ချိန်တွင်အက္ခရာများသာပေါ်လာမည်၊ ပုံများမပေါ်လာပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်။
Isabe Lika ရောမ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ facebook ကိုပုံမှန် ၀ င်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသောအင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ၊
Isabe Lika Roman အားပြန်ပြောပါ
alexander junior သို့ပြန်သွားရန်
oo sii ps ငါဝမ်းနည်းပါတယ်၊ စာတိုယာယီမရနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းထပ်မံကြိုးစားပါ
သူတို့ကခင်ဗျားကို xke ami စီစဉ်ပေးပြီးပြီ
ကားလို့စ် Enrique Chuquimango Qui ဟုသူကပြောသည်
Carlos Enrique Chuquimango Qui သို့ပြန်သွားပါ
lopez ရေကူးကန် ဟုသူကပြောသည်
Cristi-love ၁၉၉၂ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအချို့ဟဲလို .... သူတို့ကကျနော့်သူငယ်ချင်းစာရင်းထဲမှာပါပေမယ့်သူတို့ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်မလှုပ်တော့ဘူး။ porke ……ဒါပေမယ့်အဲ့တာမတိုင်ခင်ကဖန်သားပြင်ပေါ်ကပြတင်းပေါက်တစ်ခုပေါ်လာပြီးငါ့ကိုသတိပေးလိုက်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကငါဘာလုပ်ရမလဲ
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည့်အခါအမှားတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်အမှားကုဒ်ကိုထပ်ကြိုးစားပါ။ (2 (FBAPIE error domian)
ထို့နောက်ငါပြန်ဝင်သော်လည်းအခြားဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အတူ၊ နံနက်ယံ၌ဝင်ရောက်ပြီးလွဲချော်ပါကကျွန်ုပ်ပြန်ဝင်လာသောအခါကျွန်ုပ်မ ၀ င်လိုဘဲအခြားတစ်ခုသို့ ဝင်၍ ကျွန်ုပ်ဝင်ရောက်လျှင် @ @
Yessi_1959 ကို reply
Bruschini ၁ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်မျက်နှာမ ၀ င်နိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ
hello to me ကဒီကိုဝမ်းနည်းပါသည်၊ စာများခေတ္တယာယီမရနိုင်ပါ ကျေးဇူးပြု၍ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းထပ်မံကြိုးစားပါ ဒါပေမယ့်မနေ့ကဘာလို့မလုပ်တာလဲမသိဘူးလို့တစ်ယောက်ကရှင်းပြတယ်
ကျွန်ုပ်စာများလက်ခံရရှိခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းမပြုနိုင်ပါ၊ ဤစိတ်မကောင်းပါဟုပြောကြားသည်၊ စာတိုများကိုခေတ္တယာယီမရနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းထပ်မံကြိုးစားပါ မနေ့ကငါဘာလို့မလုပ်ခဲ့တာလဲလို့ငါသိတယ်၊ ငါကဘာလို့အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာလဲလို့ငါ့ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကရှင်းပြတယ်
tatiana bustillos garcia ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Facebook အကောင့်တွင် chefville ကစားသည်။ သို့သော်သင်ဂိမ်းကစားသည့်အခါကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်တွင်အခြားသူတစ် ဦး ၏ဂိမ်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မဆိုင်ဘဲပေါ်လာသည်။
tatiana bustillos garcia သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ မနေ့ကပြaနာတစ်ခုရှိလို့ငါ့လက်ပ်တော့ပ်ပေါ်ကစာတွေကိုမဖွင့်နိုင်ဘူး၊ စကားပြောတာလည်းမတွေ့ရဘူး။ ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်လို့မရဘူး၊ အကူအညီareaရိယာထဲ ၀ င်လို့လည်းမရဘူး။ ဒါကလည်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလား။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာပြwithနာရှိလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Daniel Leal ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာကို ၀ င်သောအခါကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့် xk ကို ဝင်၍ မရပါ၊ လွန်ခဲ့သောလွန်ခဲ့သောလူတစ်ယောက်၏အကောင့်ဖွင့်ထားပါသည်
Daniel Leal အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါပြeverythingနာတစ်ခုရှိသည်။ အရာရာတိုင်းသည်အစီအစဉ်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များမှဓါတ်ပုံများမရရှိပါ။ မည်သည့်ဓါတ်ပုံများကိုမျှမတွေ့နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်ရေးသားစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ချက်တင်စကားပြောသောနေ့တွင်ကျွန်ုပ်ကိုပြောပြီး၊ ကျွန်ုပ်ထပ်မံရေးလိုက်သောအခါယနေ့ကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပုံကိုမည်သို့ပြုပြင်နိုင်မည်နည်း။
ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းတွေ Facebook ကိုဘာလို့လက်မခံနိုင်တာလဲ
ငါ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာသို့သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Enter ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ရွေ့လျားခြင်းမရှိပါ။ မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ဝင်ရောက်ပါကကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာအသစ်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည် tabs များမည်သို့ဖွင့်ရမည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
Claritha ruiz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်အချို့သောရှုပ်ထွေးမှုများရှိနေသည်၊ လက်ဝဲဘက်တွင်ပေါ်လာသောစကားဝိုင်းသည်ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံများတင်ချင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်အကောင့်သို့လည်းကောင်း၊ ငါမလုပ်နိုင်သည့်အုပ်စုတစ်စုသို့ - သူတို့ထုတ်ဝေသောအခါတွင်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ စာမျက်နှာတခုခုမှတစ်ခုခုနှင့်ဤ "ရှည်လျားသောတွေ့မြင်ပါ" ဆိုသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်နှိပ်လိုက်သည့်စာသားသည်အလွန်ရှည်လျားလွန်းသည်ကိုမရရှိနိုင်ပါ! ငါအကောင့်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုအဘယ်သို့ငါပြုနိုင်သည်ကိုပြောပြနိုင်လျှင်ငါဖြစ်စေတန်ဖိုးထားမယ်လို့ဖြစ်စေမဖြစ်နိုင်ပါ
Claritha Ruiz သို့ပြန်သွားပါ
Jose ramon gonzalez ဟုသူကပြောသည်
amy သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သတိပေးချက်များကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်သောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုမမြင်နိုင်ပါ
jose ramon gonzalez အားပြန်ပြောပါ
Natalia Aguilera နေရာယူပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်သည် farmville2 ဂိမ်းထဲသို့ဝင်သောအခါကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာတစ်ကွက်လုံးရှိသည်
Natalia Aguilera အားစာပြန်ပါ
Justin alvarado ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်မအောင်မြင်မှုများစွာရှိပါကကျွန်ုပ်ကစားပါသည်။ FARMVILLE2″ ဂိမ်း၏အိမ်နီးချင်းများသို့မည်သည့်တောင်းဆိုချက်မဆိုပေးပို့သောအခါတွင်လည်းဂိမ်းထဲ ၀ င်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သို့မဟုတ်မ, ထိုနည်းတူငါအမှားမက်ဆေ့ခ်ျကိုမပို့နိုင်ပြီးနောက်မှထပ်ကြိုးစား ... မျှော်လင့်ဤအမှားများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Justin Alvarado သို့ပြန်သွားပါ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမှတ်ချက်ပေးလို့မရဘူး၊ အကြိုက်မတင်နိုင်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် fb ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေဖွင့်လို့မရဘူး
Gaby_car ၉၅ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံများကို tag သို့မဟုတ် upload လုပ်၍ မရပါ။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိတွင်ထုတ်လွှင့်ပါကကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Gaby_car 95 ကိုစာပြန်ပါ
ရှည်လျားသောပို့စ်များရှိတိုင်း၊ “ ထပ်မံကြည့်ရှုရန်” ဆိုသောနေရာကိုကျွန်ုပ်မဖွင့်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း။ -.-
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကကျွန်ုပ်အားအမှားများပေးသည်။ ဓါတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ လုံခြုံရေး filter ကိုပိတ်ထားရန်လိုပါသည်။ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကကျွန်ုပ်ကိုအမှားအယွင်းများပေးသည်၊ လုံခြုံရေးဓါတ်ပုံများကိုပိတ်ထားရန်ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံများမမြင်ရပါ။ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ
Jaqueline: D ဟုသူကပြောသည်
ငါတကယ်ရှာနေတာမဟုတ်ပါဘူး - S
EL ဖေ့စ်ဘွတ်မှကြိုဆိုပါသည်။ ငါမကြာခဏပေါ်လာသည့်အဖြူရောင်နောက်ခံစာလုံးများနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အမြဲတွေ့မြင်နေရသည့်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ
AND ငါပြည်နယ်များမသတ်မှတ်နိုင်: __
ကျေးဇူးပြု၍ အဖြေကို, ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာအတှကျ Facebook စာအုပ်မရှိဘဲမရပါ: __
JAQUELINE သို့ပြန်သွားရန်: D
ဟဲလိုကျွန်ုပ်၏ Facebook စာအုပ်ကိုစမင်မကြည့်နိုင်ပါ၊ အခြားသူများ၏အခြေအနေကိုကြည့်ပါ။ __
ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ပါပဲဒါပေမယ့် explorer ထဲမှာ chrome နဲ့သာကြည့်လို့ရပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ သူတို့ငါ့ကိုစာတိုပေးပို့တဲ့အခါမျက်နှာပေါ်ပြappearsနာရှိနေတယ်။ အသံပေါ်လာတယ်။ အပြာရောင်ဘားမဟုတ်ဘူး။ ဘာလုပ်နိုင်လဲ။ ဒါကငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြproblemနာတစ်ခုလား။
ပြီးတော့ adblok (သို့) FB refresh လိုမျိုး extensions တွေကိုထားပါ၊ အဲဒါကဖေ့စ်ဘွတ်ကိုနှေးစေနိုင်တယ်။ သို့မဟုတ်ငါ့စာမူများကိုမမြင်နိုင်ဘူးလား ငါအဖြေတွေလိုတယ်သူတို့ကဒီအတွက်ကုစားမရှာတဲ့အပူတပြင်းပဲ!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပျက်နေပြီ။ မနေ့ကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်မိနစ် ၃၀ ကြာတော့ငါဓာတ်ပုံတစ်ခုဖွင့်ချင်တယ်။ ဖွင့်လို့မရဘူး ၁၀ ကြိမ်နှိပ်လိုက်တယ်။ ချက်တင်တောင်မရခဲ့ဘူး။ သတိပေးချက်တွေကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်။ သူတို့အဲဒီမှာနေတယ် (နံပါတ်အဘယ်သူမျှမထွက်လာ) ။ ဘာလုပ်လို့ရလဲငါ့ကိုကူညီပါ။
ငါ fb ၏ငါ့အတ္ထုပ္ပတ္တိယခုသော့ဖွင့်ချင်တယ်
လူး Escalante ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာများရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်။ မရပါ၊ အကောင့်ကိုပိတ်။ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်ထွက်ခွာပြီးပြန်လည်ဝင်ရောက်ရပါမည်။ ဤသို့ဖြစ်ပျက်နေပါသည်
Luis Escalante အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်ချက်တင်ဖွင့ ်၍ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားအရေးတကြီးအကူအညီပေးနိုင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုကြိုဆိုရန်သွားသောအခါသင့်အီးမေးလ်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုရေးရန်သွားသည့်အခါထူးဆန်းစွာထွက်ပေါ်လာပြီး၎င်းကိုသူရင်ဆိုင်ရသည့်အီးမေးလ်ကိုထည့်လိုက်သော်လည်းမျက်နှာမှထူးဆန်းစွာထွက်လာသည်နှင့်အဖြူရောင်အားလုံးထွက်လာသည် အပြာရောင်မဟုတ်ဘဲပုံမှန်အားဖြင့်အရာအားလုံးသည်စာရင်းကြည့်ခြင်းနှင့်တူသည်
နှင့် Blah Blah အားလုံးသည်အလွန်နိမ့်ကျပြီးအလွန်ထူးဆန်းသည်။ // ငါတစ်ခုခုပြုလုပ်နိုင်သည်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်ထားသည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်မနှိပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်မနှိပ်နိုင်ပါသို့မဟုတ်ဘာမှမလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ အကူအညီ: //// /////
အိန်ဂျယ် Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Jessy haau ဟုသူကပြောသည်
Jessy Haau အားပြန်ပြောပါ
tamborazo holguin ဟုသူကပြောသည်
holguin tamnborazo tamborazo10@live.com
tamborazo holguin အားပြန်ပြောပါ
Kaylaa gazpar ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ စကားမပြောနိုင်ပါ၊ သို့မဟုတ်စာစောင်တွင်ပါရှိသည့်အကြိုက်အရေအတွက်ကိုမတွေ့နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၌ရှိနေသောချိတ်ဆက်မှုများကိုမတွေ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Kaylaa Gazpar သို့ပြန်ပြောပါ
ဗစ်တာ Manuel Sau Gomez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ကိုအတူတူပါပဲဖြစ်ပျက်, သူတို့သည်သင့်ကိုကူညီပေးခဲ့ပြီးပြီ, ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးကူညီနိုင်
ဗစ်တာ Manuel Sau Gomez အားပြန်ကြားချက်
OLA တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပြPROနာအနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မျက်နှာကိုမြင်တွေ့ရပြီးအရာခပ်သိမ်းသည်ဖြစ်တတ်သည်။ ကျွန်ုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ထံစာရေးသောအခါကျွန်ုပ်သည်စာမဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဖတ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်သာကျွန်ုပ်မည်သည့်အရာကိုလုပ်နိုင်ပါသနည်း။
ပြီးခဲ့သည့်ညကမှကျွန်ုပ်စာမျက်နှာသို့မ ၀ င်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏သား pc မှ၎င်းစာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တင်လိုသောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထပ်မံကြိုးစားရန်နှင့်အောင်မြင်မှုမရှိပဲ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောပါလိမ့်မည်။
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်မျက်နှာကို ၀ င်မိလျှင်ပြtheနာကကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုအွန်လိုင်းမတွေ့နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ထိပ်ရှိကျွန်ုပ်၏မက်ဆေ့ခ်ျများတောင်မှ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ငါ၏အ status, ငါမှတ်ချက်ပေးရန်မဟုတ်, ငါ့မှတ်ချက်များမမြင်ရနိုင်ပါ
x ပြpleaseနာကိုဖြေရှင်းပေးပါ၊ n ထည့်ပါ
သငျသညျမှာအားလုံးဘာမှမမွငျနိုငျပါလျှင် peo de နှုတ်ခမ်းနှုတ်ရကျိုးနပ်သည်။ အခုဖြေရှင်းပါ၊ ငါဟာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်စာရင်းမပါ ၀ င်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ areaရိယာတစ်ခုလုံးသည်လုံးဝလွတ်နေပုံပေါ်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည် edit လုပ်ထားသောဗွီဒီယိုကို Windows live Maker တွင် upload လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပုံသည်မမှန်ကန်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်တည်းဖြတ်ထားသည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်း upload ပြုလုပ်လိုသည်။ ၎င်းသည် windows maker ဖြစ်သော်လည်း၎င်းအားကျွန်ုပ်အားမထားရှိပါ။ ဗွီဒီယိုအမျိုးအစားဟာမမှန်ဘူးဆိုတာကိုပြောတယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့တောင်ကူညီချင်တယ်။ Ayudaaa အရေးတကြီးဖြစ်ပါတယ် !!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကစာနယ်ဇင်းများရှိသည့်အခါ၎င်းကိုမောက်စ်ဖြင့်ရိုက်လျှင်နောက်ထပ်ကြည့်ပါဟုဆိုသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ????
Felix CORCUERA ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ Facebook Book ကကျွန်ုပ်အားမှတ်ချက်များကိုဝေငှရန်ခွင့်ပြုမထားပါ၊ သို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံများကိုတင်မည်လားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သက်သည်။ သော့ခလောက်များသည်အလုပ်မဖြစ်ပါ။ အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးပါ။
FELIX CORCUERA သို့စာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန် fb သို့ဝင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် application များထဲသို့ ဝင်၍ ရေကူးကန်ကစားခြင်းတွင်ကစားသောအခါကျွန်ုပ်ကြော်ငြာများရရှိသောကြောင့်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်ရရှိပါကကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Deiby Flores ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ရက်စွဲကို pc ၌ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အခြားတစ်ခုဖြစ်လျှင်၊ တစ်ခုအစားအစားထိုးလိုက်ပါ။ ၎င်းကသင့်အား xDDD ကို fix လိမ့်မည်။
Deiby Flores သို့ပြန်သွားပါ
ဥပမာ 27-02-2014 သည်
၎င်းကို 28-06-2013 အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါ
Ami Azur ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်း (သို့) ကျွန်ုပ်၏မက်ဆေ့ခ်ျများ (သို့) အသိပေးချက်များကိုမမြင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ၊ အရာအားလုံးကိုပုံမှန်အလုပ်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း တစ်ယောက်ယောက်ကကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုပြန်ပြောပါ
Ami Azur သို့ပြန်သွားပါ
raquel guerra ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်ငါ့အကောင့်ကိုထည့်သွင်း, ငါ့ပရိုဖိုင်းကိုပေါ်လာသို့မဟုတ်ဘာမှမ, ငါ့ဓာတ်ပုံအကောင့်မရှိဘဲငါ့အကောင့်သတင်းအချက်အလက်သာငါဘာမှမရိုက်ထည့်နိုင်, စင်ကြယ်သောအက္ခရာများ, ငါကဲ့သို့သောနေ့ရက်ကာလရှိသည်
raquel guerra မှစာပြန်ရန်
မင်္ဂလာပါ၊ မျက်နှာမျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာပြaနာရှိနေတယ်။ စာလုံးအသေးစာလုံးတွေကပုံမှန်မဟုတ်သလိုထူးဆန်းတဲ့စာလုံးတွေပေါ်လာတယ်။ စူးစမ်းရှာဖွေသူကနေဖွင့်ကြည့်ရင်တောင်မှစာမျက်နှာတွေကိုသော့ဖွင့်ဖို့တောင်းဆိုပေမယ့်နှေးနေတယ်။ အဲဒါကအများကြီးသော့ခတ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူး၊ အက္ခရာတွေသာတွေ့တယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်တယ်။
julieta montila garcia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ သြဂုတ်လ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ပြသနာရှိနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ပလက်ဖောင်းကိုပြောင်းလဲစေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ ဝင်ရောက်၍ မရပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်ဤအကောင့်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်နားမလည်သောဓာတ်ပုံကသာအရေးကြီးသည်။ ငါတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာဆွေမျိုးသားချင်းများရှိသည်သောငါ၏အရာအဘို့, ငါသည်သင်တို့၏ကူညီမှုတန်ဖိုးထားတယ်
julieta montila garcia သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကို ၂ ရက်ကျော်မဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါ။ အကောင့်အားယာယီပိတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ ကျွန်ုပ်တွင် Sony Ericsson ရှိပြီး၎င်းကိုမည်သည့်နေရာမှမဖွင့်နိုင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါမည် ???????? ငါကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်
Yazmin Alvarez ဟုသူကပြောသည်
ငါ fb ကိုရိုက်ထည့်သည်စကားဝှက်နှင့်အသုံးပြုသူအမည်ကိုထည့်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပေးသောအခါအရာအားလုံးကိုဖြည့်သွင်းသည်မှာကွက်လပ်ရှိသည်။ ပရိုဖိုင်းလိပ်စာတစ်ခုခုကိုထည့်လိုက်လျှင်၎င်းသည်ငါ့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
အဘယျသို့ ime ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်သွယ်မှုကိုငါအကူအညီလိုအပျအတည်ပြုသည်မဟုတ်ကပြောပါတယ်
ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏နံရံတွင် တင်၍ မှတ်ချက်များ တင်၍ မရပါ။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမှအသိပေးအကြောင်းကြားမှုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Facebook ကိုလျှောက်လွှာတွင်ဒေါင်းလုပ်ချရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်ုပ်မှားယွင်းစွာယူခြင်း ၉၂၇ ။ ဖြေရှင်းချက်ကျွန်ုပ်သည်ဤပြproblemနာနှင့် ၄ ရက်ကြာပြီးပါပြီ။
claudio ridriguez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ၌ပြproblemsနာများရှိသည်၊ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစီ၏အဆုံးတွင်ပေါ်လာသောမျက်နှာပေါ်လာခြင်းနှင့်မတူညီသောစိတ်ခံစားမှုများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဓာတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေပျောက်ဆုံးသွားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာဓာတ်ပုံအိုင်ကွန်လည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မက်ဆေ့ခ်ျနှစ်ခုပို့ပြီးဖြစ်သော်လည်းစနေ၊ တနင်္ဂနွေဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုချက်ချင်းပြန်ဖြေမည်မဟုတ်ပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါ့ကို caria china ကိုဖေ့စ်ဘုတ်မှာတင်ပေမယ့်ငါ့အကောင့်ကဝင်မလာပါဘူး
မာရီယာ Amparo ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့ (စ်) ဘွတ်ကိုသွားပြီး၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေရတယ်၊ မက်ဆေ့ခ်ျတောင်းခံချက်တစ်ခုရတယ်၊ ဒါပေမယ့်မတွေ့ရဘူး၊ ငါပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အဆက်အသွယ်တချို့ဟာငါ့ဆီစာရေးပြီးဖြစ်လို့ငါရတာလား။
maria amparo အားပြန်ကြားပါ
RAYMUNDO MILLAN OJEDA ဟုသူကပြောသည်
တစ်လကြာလျှင် Facebook စာအုပ်ထဲသို့ဝင်သောအခါ၊ အိမ်၏ပုံရိပ်များနှင့်ဗီဒီယိုများသည်မှန်ကန်စွာမတင်သွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပြူတာနှစ်လုံးနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာသုံးသပ်ပြီး၎င်းသည်ဖျက်လိုက်သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရေကြောင်းအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
RAYMUNDO MILLAN OJEDA သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်၊ ​​မျက်နှာစာအုပ်ထဲမှာပုံတွေမတွေ့ရဘူး။ ငါ WORDOX ပါ။ ငါ့အဖြေကိုမတွေ့ဘူး။
သင့်ရဲ့ desktop အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်ငါးခု
PES 2014 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ